That's so good, right?: A Fond Memory
ချစ်မိရသူနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရချိန်ဟာ ဘ၀အတွက် ဘယ်လောက်မှ အရေးမပါဘူးဆိုပေမဲ့ ချိုမြိန်လွန်းလှပါတယ်။ သူ့နံဘေးမှာ ထိုင်နေရချိန်၊ လှဲလျောင်းနေရချိန်တွေမှာ အညိုရောင်မျက်ဝန်းများကို စိုက်ကြည့်မိတော့ နှစ်များစွာအတွင်း သူ့အပေါ် အရာအားလုံး နစ်မျောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အဖြစ်ကို သတိရမိပါ၏။ ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်း သူ့လက်များကို ထိကိုင်မိစဉ်မှာလည်း အညိုဖျော့ရောင် သူ့ လက်ချောင်းများဟာ အဖြူကဲတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းများကို အလွန်နွေးထွေးစေခဲ့မှန်း သိခဲ့ရပါပြီ။ တမ်းတမိနေဆဲ ခံစားမှုဖြစ်စဉ် လေးတွေပေါ့လေ။
အထက်တန်း တက်စဉ်ကာလနှစ်တွေမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းရေကူးအသင်းမှာ ချန်ပီယံပါ။ မိန်းကလေးတွေ အားလုံးမဟုတ်တောင် အများစုရဲ့မျက်လုံးများဟာ ကျွန်တော့်ဆီမှာပါ။ ပြိုင်ပွဲတိုင်း သူတို့အော်ဟစ်ကောင်းချီးပေးနေတာဟာ ကျွန်တော့်ကိုအားပေးနေတာ မဟုတ်ဘူး မြှောက်ပင့်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းအသင်းရဲ့ ကပ္ပတိန်အဖြစ် အထက်တန်းကာလ သုံးလေးနှစ်မှာ ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့သူ ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းကိုမုန်းတယ်။ အဓိကကျတဲ့အရာတွေကို တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်အောင် မေးခွန်းထုတ်တတ် ဖြေတတ်အောင် မသင်ကြား မလေ့ကျင့်ပေးကြဘဲ အလွတ်ကျက် ဒါပဲဖြေတွေများနေတာလေ။ ဘယ်လိုမှ စိတ်ဝင်စားလို့မရဘူး။
ဆရာတွေကလည်းချစ် မိဘတွေကလည်း စိတ်မချတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝန်တန်းမှာ အမှတ်ကောင်းကောင်းနှင့် ကျော်ဖြတ်ဖို့ အိမ်မှာ စာသင်တစ်ယောက်နှင့် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ဆိုပြီး စီစဉ်ပေးကြပါတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ သိပ်တော့ စိတ်မလှုပ်ရှားခဲ့ပါဘူး သူ့ကိုမမြင်ခဲ့ချိန်အထိ။ ကျောင်းကအပြန် တစ်ခုသော ညနေခင်းမှာ အိမ်တံခါးကို ခေါက်သံ ကြားလို့ ကျွန်တော်သွားဖွင့်ချိန်မှာ သူ့ကို.....သူ့ကို စတွေ့တာပါပဲ။
'ဟေး....ကိုယ့်နာမည် ဇော်မင်းဦးပါ။ မင်းက ကျော်ကျော်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်'
ဒုတိယနှစ် ဆေးကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့် အိမ်ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်သွားတိုင်း sexy ဖြစ်လိုက်တာလို့ အမြဲငေးဖြစ်နေရသူပါလား။ အသားအရေက စိုပြေချောမွေ့ပေမဲ့ အညိုရောင်ကဲပါတယ်။ ကျွန်တော့်ထက် အရပ်ရှည်ပြီး မျက်တောင်ရှည်များဖြင့် ညှို့မျက်ဝန်းတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေအားလုံးထိုးဖောက်သိနိုင်တဲ့ အရာတွေထင်ပါတယ်။
'ညီ စာလုပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင် အကူအညီပေးဖို့ အစ်ကိုလာတာပါ'
ရုတ်တရက် ပေါင်ကြားက ညီဘွားက ခေါင်းထောင်ထလာတာကို လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ textbooks နဲ့အကာအကွယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုရိပ်မိ ဟန်တူတဲ့ သူက ငါသိပါတယ် ဆိုတဲ့အပြုံးမျက်နှာမှာပေါ်လာပါ၏။ ကျွန်တော့်အခန်းရှိရာကို လှေကားထစ်တွေနင်းဖြတ်ပြီး တက်စဉ်မှာ Online ပေါ်က မော်ဒယ်လ်တွေလို တင်ပါးတွေက လုံးကျစ်ပြီးဖောင်းနေတာကိုး။
'ဟုတ်ကဲ့....ဒါ ညီ့ Report Cards ပါ။ ဟုတ်တယ် အဲဒါက ညီ့ကျောင်းစာအုပ်တွေ'
လပတ်စာမေးပွဲရလာဒ်တွေကို သူကြည့်တာ အမှတ်နိမ့်တဲ့အထဲ ကျွန်တော်မပါတာကို တွေ့တော့ ဘယ်ဘာသာကို မလိုက်နိုင်ဘူးလည်း ဘာကိုပြင်ဆင်ကြရမယ်ဆိုတာတွေကို နှစ်ယောက်သား ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
နံရံပေါ်က ပြက္ခဒိန်စာ ရွက်တွေ တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက် ဖယ်ရှားပြီး အတန်းတင်စာမေးပွဲဖြေဖို့နီးလာချိန်ထိ သူနှင့် ကျွန်တော် စာအတူလုပ် ကြတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်စာလုပ်နေချိန် ခုတင်ပေါ်မှာ သူလှဲချင်လှဲနေတတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကိုမွှေရင်း online တက်နေတတ်တယ်။ ဒါတွေအားလုံး ကျွန်တော် သူပျင်းမှာစိုးလို့ အလိုက်သိခဲ့ခြင်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးသားအတွက် ရင်းနှီးမှုက တော့ တဖြည်းဖြည်းပိုလာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
မိုးသည်းသော ညတစ်ည နွေဦးရာသီမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း မိုးရွာချသော ညမှာပေါ့...နှစ်ဦးသားကြား အတန်ကြာ စောင့်ထိန်းခဲ့ကြတဲ့ အရာတွေ အဝေးရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခါတိုင်း စတိုင်လ် ဘောင်းဘီနှင့် ရှပ်အင်္ကျီသာ များသောအားဖြင့် ၀တ်ဆင်တတ်တဲ့ သူဟာ မိုး ရွာနေလို့ဆိုပြီး လတ်ပြတ်စွပ်ကျယ်နှင့် quarter ဘောင်းဘီတိုကို ခပ်ရွဲရွဲဝတ်ဆင်လာခဲ့တယ်။ စာတွေလုပ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ စိတ်ဝင် စားလို့၊ အာရုံစူးစိုက်လို့ မရခဲ့ဘူး။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကြည့်ပြီး အာရုံကျနေမိခဲ့တာလေ။ ဖောင်းကြွနေတဲ့ ရင်အုပ်၊ ကျစ် လစ်နေတဲ့ လက်မောင်းတွေက အားရစရာ။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းရရင်ကောင်းမယ် မထူမပါးလေး။ ပေါင်ကြားင အဖုအထစ်လေးက တဖြည်းဖြည်းကြီးလာရင် ဘယ်လို အရသာများပေးမှာလည်း စမ်းသပ်ချင်လိုက်တာ စသဖြင့်။
သူဘာပြောလိုက်မှန်း ကျွန်တော်အရိပ်အမြွက်ကိုမသိလိုက်တာ။ ဒါကြောင့် သူထပ်ပြီး စကားဆိုတော့မှ ကျွန်တော်မနေတတ် မထိုင်တတ် စွာ ပါးပြင်တွေ နှင်းဆီခင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာပြန်ပြောရမယ်မှန်းလည်းမသိ။ ငြိမ်သက်ပြီး သူ့မျက်ဝန်းကိုသာ စိုက်ကြည့်နေ တော့ ထိုင်နေရာမှ ထလာကာ ကျွန်တော့်မေးလေးကိုကိုင်ရင်း ခဏအကြာ သူ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ငုံ့ကိုင်းရင်းနမ်းပါတယ်။ နမ်းပုံက ငြင်သာ လွန်းတာ အမေက သားငယ်ရဲ့ ပါးပြင်ကို နမ်းသလို ခပ်ဖွဖွ။
သူ့အနမ်းတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေးပြန်ပြီး တုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်ယူ လျှာကို သူ့အာခံတွင်းထဲထိုးထည့်ရင်းပေါ့။ ပူနွေးပြီး အနံ့အသက်ကင်းစွာဖြင့် သူ့ကိုနမ်းရတာ ရင်ထဲ တသိမ့်သိမ့်ပါပဲ။ သူ့လက်ချောင်းများဟာ ဖောင်းကြွပြီး ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီ ဂွဆုံစီပွတ်သပ်ရင်း ဖျစ်ညှစ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းသားဖြင့် အာသာပြင်းပြင်း နမ်းနေရာကနေ ဖယ်ခွာလိုက်ကာ ၀တ်ထား တဲ့ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက ဇစ်ကိုဖြည်းဖြည်းဆွဲဖွင့်၊ boxer ဘောင်းဘီထဲက ညီဘွားကို သူပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း အရောင်တောက်နေ တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ပါရဲ့။
ကျွန်တော် ဘောင်းဘီတွေကို ဆွဲချွတ်ပြီး အ၀တ်ခြင်းထဲ ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တီရှပ်ကိုရောပေါ့။ အခုသူ့ရှေ့မှာ အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်ထီးဖြစ်ရပါပြီ။ ခုတင်ရှိရာကို သူလျှောက်လှမ်းသွားတော့ ကျွန်တော် နောက်က ထပ်ချပ်မကွာလိုက်သွားရင်း ခုတင်ပေါ် အ လိုက်သင့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူက...ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းများမှတစ်ဆင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို နမ်းတာ။ လည်တိုင်တလျှောက် ဗိုက်သားများ မှတစ်ဆင့် နမ်းလာတာ ၆လက်မလောက်ရှည်ပြီး ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဆီကိုရောက်တော့ ရပ်တန့်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို တစ်ချက်မော့ကြည့်ကာ သူပြုံးတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်ဖ၀ါးတွေနှင့် ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ရင်း ခပ်တင်းတင်း ညှစ်တော့တာ။ ဒီလောက်လုပ်တာလေးနှင့် ကျွန်တော့်မှာ ပြီးဆုံးဖို့ လုံလောက်နေပြီ။ တစ်ခဏခြင်းမှာပဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်ပြီး ပူနွေး နေတဲ့ ပါးစပ်အတွင်းကိုထည့်လိုက်တာ နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ရွှေဥတွေထိတဲ့အထိပါပဲ။ အဲဒီနောက် ခပ်ဖြည်းဖြည်း တကယ့်ကို ဖြည်းညှင်း စွာ ပြန်ထုတ်တယ် ကွမ်းသီးခေါင်းထိ။ ဒီအတိုင်း သူအကြိမ်ကြိမ်လုပ်နေတာ အရှိန်နှုန်းလုံးဝမပြောင်းပါဘူး။ သူ့ပါးစပ်ထဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို အထုတ်အသွင်းလုပ်နေစဉ်မှာ ကျွန်တော် က ဆံနွယ်ခွေလေးတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနှင့် ထိုးဖွပေးနေမိတာ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ် လုံး တုန်ခါလာချိန်မှာ သူတစ်မျိုးပြောင်းတယ် ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ၀ိုက်ကာ ၀ိုက်ကာပေါ့။ ကျွန်တော်....ကျွန်တော် မပြီးချင်သေးဘူး အရသာခံချင်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက အထာကိုသိလွန်းလှတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဖြင့် ခပ်ဖွဖွစုပ်နေ လိုက်တာ ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်စွာ ပန်းထုတ်မိပါတယ် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ပါးပြင်တွေပေါ်။ သူကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကိုပြန်ပြီးထိတွေ့ ကာ နမ်းတော့ သူ့အာခံတွင်းနှင့် ပါးပြင်က အရည်ပျစ်တွေရဲ့ အရသာကို ခံစားရပါရော။ ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတဲ့ ခဏသောအချိန်ပါပဲ။
အနမ်းမှာ နစ်မျောနေရင်း သူမတ်တပ်ထရပ်ကာ အ၀တ်တွေသူ့ဘာသာချွတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲ ပေါ် ထွက်လာတဲ့ ဗိုက်သား၊ အဲဒီမှတစ်ဆင့် ရေခဲတုံးကို ထုဆစ်ထားတဲ့ ပန်းပုလို သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်ရပါပြီ။ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကလည်း လှေကားထစ်လုပ်လို့ရလောက်တယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရင်း စိတ်ပြန်ပါလာကာ တပ်မက်စိတ်တွေဖြစ်ရပါပြီ။ ဘောင်းဘီ ကိုချွတ် အောက်ခံ ကိုအသာထပ်ချွတ်ချိန်မှာတော့ မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးဆုံးပစ္စည်းကို တွေ့လိုက်ရတာပေါ့။ အံ့သြပြီး ပြူးနေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို သူကြည့်ပြီး ပြုံးတယ်။ အရှက်ပြေ သူ့ငပဲကို ကိုင်ပြီး အာခံတွင်းထဲထည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တာပေါ့ လေ ဘယ်ရမလဲ။
မာတောင်ပြီး ရှည်လျားလှတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုလုံး ပါးစပ်ထဲအကုန်ထည့်ဖို့ ကြိုးစားမိလိုက်တာ တံတွေးသည်း ခံစားရပြီး ချောင်းဆိုးရပါပြီ။
'ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ ညီရဲ့၊ မင်းအကုန်မသွင်းနိုင်ရင်လည်း အဲဒီလောက်သွင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကွာ'
သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ရော ပြီးတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ခံစားမှုလားမပြောတတ်။ မျက်စိထဲမှာ climax ဖြစ်ပြီး တုန်ခါနေတဲ့ သူ့ပုံရိပ်ကို မြင် ကြည့်ချင် တာကြောင့် ကြိုးစားမိခြင်းပါ။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့် လည်မျိုကြွက်သားတွေကို ဖြေလျော့ကာ သူ့ပစ္စည်းရဲ့ တစ် လက်မစီ တိုင်းကို မျိုချဖို့ ထပ်လုပ်ပါတယ်။ -ိင်တံကြီးကို ငြင်သာစွာပဲ အသွင်းအထုတ် သူလုပ်ရင်း ခန္စာကိုယ် တစ်ခုလုံး လှုပ်ရှားကာ ဖီးလ်ယူပါ ရော။ ကျွန်တော့်လက်တွေက သူ့တင်ပါးအစုံကို ထိန်းကိုင်ထားတာဆိုတော့ တဆတ်ဆတ်တုန်ယင်လာမှုကို သတိထားမိ တယ်။ သူ climax ဖြစ်တော့မယ် ထင်ရဲ့။
ဘာမပြော ညာမပြော လျှာတွေ အာတွေနဲ့ပြုစုနေရာကနေ ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကြောင့် သူမေးလာခြင်းပါ။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲ ပက်လက်လှဲထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျလာအောင် ဆွဲဖက်လိုက်ရင်း ခြေထောက်များနှင့် ခွညှပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကို သူသိသွားပြီလေ။
'မင်းအရင်က နေဖူးလို့လာ ဒီလို?'
'ဒါဆို ကိုယ်တို့ လုပ်ဖို့မသင့်ဘူးထင်တယ်။ မင်းနာကျင်မှာကို ကိုယ်မလုပ်ချင်ဘူးကွာ။ ပထမဆုံး အကြိမ် bottom အဖြစ်နေရရင် နာတယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိတယ်'
'ကျွန်တော် အစ်ကို့ကို feel လာတယ်။ အစ်ကိုနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှ ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါဆို နာကျင်မှုတွေ အဝေးဆုံးဖြစ်သွားမယ် ထင်တယ်ဗျ'
စကားလေးကို သူ့နားရွက်နား အသာတိုးတိုးကပ်ပြောလိုက်ရင်း နားဝလေးကိုလျှာနဲ့ကလိလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ငြင်ငြင်သာသာ အနမ်းပေးပါရော။
သူ့ ဒစ်ကြီးကို အသာကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ဆီ အသာတေ့ကာ တကယ့်ကို ဖြည်းညင်းစွာ ဖိပြီးသွင်းတယ်။ ကျပ်သိပ်နေတဲ့ကြွက်သား ထဲ တိုးဝင်အောင် သူအတော်ကြိုးစားနေရတာပေါ့။ အရမ်းနာကျင်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးရရှိနေပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာမှာတော့ အဆင်ပြေချော မွေ့ဟန် ပြုံးပြမိရတယ်။ နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီး ဖြေလျော့ရမှုကို သူမမြင်စေရအောင်လုပ်ရင်းလေ။
မျက်ဝန်းများကို မော့ကြည့်မိတော့ သူလည်း ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကို ကြင်နာမှုကဲသော အကြည့်များဖြင့် စိုက်ကြည့်နေတာကို မြင်ရ ပါပြီ။
'Relax baby, အဲဒီလို တအားမညှစ်ထားနဲ့။ ပါးစပ်လေးဟပြီး အသက်ရှူ။ အော်ချင်လည်း အော်လိုက်။ ကိုယ် ဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ပါ့မယ်ကွာ'
ငြင်သာတဲ့ စကားလုံးများ နားထဲဝင်လာတော့မှ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တင်းထားတာကို ဖြေလျော့ရင်း အလိုက်သင့်ကြိုးစားတော့မှ သူ့ ပစ္စည်း အောင်မြင်စွာ အဆုံးသွင်းနိုင်ပါတော့တယ်။ တကယ့်ကိုငြင်သာလှတဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်မှုများကြောင့် ကျွန်တော် နာကျင်မှုကို မေ့သွားရကာ ကျေနပ်ခြင်းတွေ ခံစားရပါ၏။ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ကျွန်တော့် ကို ခပ်တင်းတင်းဖက်တယ်၊ ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး အထုတ် အသွင်းမြန်လာကာ တစ်ချက် အဆုံးထိ ဖိကပ်လိုက်ကာ ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကို အနမ်းပေးရင်း ခရေပေါက်ထဲက သူ့ဟာကို အသာဆွဲချွတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်ပါရဲ့။ နှစ်ဦးသား စကားမဆိုမိကြဘဲ သူ့လက်မောင်းတွင်း ကျွန်တော်ခိုဝင်ကာ အိပ်စက်နေမိတာ မိနစ်အတော်ကြာ။
ကျွန်တော်....ကျွန်တော် သူနဲ့ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ်။ သူနဲ့အတူနေချင်သေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အတွက် ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်တာ မြန်ဆန်လွန်းသလား မသိတော့။ သူထရပ်ကာ အ၀တ်အစားတွေ ထ၀တ်ရင်း ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။
သူ့တုန့်ပြန်မှုအတွက် ကျွန်တော် ဆိုးရွားစွာဝမ်းနည်းသွားမိပါတယ်။ ဂေးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလား? သူဟာ ဒါမှမဟုတ် ရှိခဲ့ပြီးသားလား? ကျွန်တော်ကသာ ခံစားချက်ထားနေတာ သူက ဒီလို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမျိုး မရချင်ဘူးလား? မသိတော့။
တုန့်ပြန်စကား သူမဆိုတာ နာရီချီပြီးကြာသလို ခံစားရပါတယ်။ သူကျွန်တော်ရှိရာ တွားတက်လာရင်း ပြောတာက 'အခုမင်းကို ကိုယ်နမ်းတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်လစ်တော့မယ်' တဲ့။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည်တွေ တလိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာမိကာ သူ့လက်မောင်းတွေကို ဆွဲကိုင်ထားမိတယ်။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားများကို အသာနမ်းကာ ပြုံးလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်ရည်များကို သုတ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် သူဆက်ပြောမယ့် စကားများကို မကြားချင်တာကြောင့် ပြတင်းပေါက်ရှိရာ လှမ်းသွားမိလိုက်ပါပြီ။
'ပြီးတော့.....ကိုယ့်ကားကိုမောင်းပြီး အိမ်ပြန်မယ်။ အိမ်ကိုရောက်ရင် မာမီ့ကိုပြောလိုက်မယ် ကျွန်တော့် လေးကိုတွေ့ပြီ မာမီလို့'
ရင်ထဲ လှိုက်ဆင်းသွားတဲ့ အလုံးကြီးနဲ့အတူ သူ့ကိုလှည့်ကြည့်ရင်း တောက်ပစွာ သူ့ကိုပြုံးပြမိရပါပြီ မျက်ရည်စများဖြင့်။
ရေးသားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေဟာ အခုချိန်ဆိုရင် ၁၀စုနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့နေ့ကစပြီး သူ့ကိုချစ်ခဲ့သလို အခုလည်း အချစ်စိတ် သူ့အပေါ်မြဲနေဆဲပါ။ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပုံသဏ္ဌာန် က အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းချစ်သူ....သူငယ်ချင်း ချစ်သူအဖြစ်ပေါ့ဗျာ။
Alex Aung (14/8/2010)
စာကြွင်း။ ။ သူ့အကူအညီဖြင့် အထက်တန်းကျောင်းကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သလို နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားပြန်တော့ နှစ်ဦးသား စပ်တူလုပ်ငန်းငယ်လေးကို ထူထောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတာပါ။